Jackie Chan na -enweta ihe nrite Oscar mgbe afọ 56 nke ọrụ | Nye m oge ntụrụndụ
Jackie Chan na -enweta ihe nrite Oscar
Akụkọ sinima | | Ndị na -eme ihe nkiri, Cine
Dị ka ekwuputala, ọsọ a na -eme maka oscars amalitelarị. O meela nke a na nke a na-akpọ "Governors Awards", ebe Jackie Chan enwetala ihe nrite Oscar.
Na emume nnyefe ihe kacha dị mkpa na Hollywood abịala, nke malitelarị ime mkpọsa iji nweta akara ugo mmụta dị oke ọnụ ahịa nke American Academy.
N'ime akụkọ ntolite, enwere mmadụ anọ nwetara ihe nrite Oscar a na -akwanyere ùgwù: onye na -eme akwụkwọ Frederick wiseman Onye dị afọ 86, mara maka «La danse», site na 2009, onye nchịkọta akụkọ dị afọ 90 Anne V. mkpuchi Afọ 90 ("Laurence of Arabia na 1962, onye ntụzi nkedo Lynn stalmaster 88 ("Fiddler on the Roof", 1971) na Jackie Chan dị afọ 62 ugbu a, nke ọdụdụ na ama ama n'ime mmadụ anọ
Ọnụ ụzọ gala nwere ọnụ ahịa dị ala nke euro 400. Na mgbakwunye na ịsọpụrụ Hollywood kachasị ukwuu, gala a na -eje ozi, dịka anyị kwuru, ka kpakpando na ndị ọkachamara nwere olile anya iru eru maka ihe oyiyi ọla edo na Oscars na -esote, malite imeri votu.
N'etiti ndị na -aga mmemme ahụ enwere ike ịhụ Emma Stone, Annette Benning na di ya Warren Beatty, Almodóvar, Paul Verhoeven, Nicole Kidman, Tom Ford ma ọ bụ Isabelle Huppert na Marion Cotillard, n'etiti ndị ọzọ.
1 Mbipụta ọzọ nke Oscars
2 Nrọ mezuru
3 Nnyefe gala
4 Akụkọ gbasara onwe
5 Afọ mbụ
6 Oge Amerịka ya
Mbipụta ọzọ nke Oscars
A ga -eme mbipụta nke 89 nke Oscars na February 26, 2017. Ihe nrite ndị a na -adọkpụ, n'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, arụmụka maka ọdịiche agbụrụ na okike.
Nke a bụ arụmụka na onye isi ụlọ akwụkwọ mmuta a ma ama, Cheryl Boone Isaacs ọ chọrọ ka echefuru ya, na iji ikuku ọhụrụ na -emezigharị ụlọ ọrụ ahụ. N'okwu nke ya, "Ọ bụ aha na ọ bụghị ọnụọgụ, n'oge ejighị n'aka sinima nwere ike bụrụ njikọ nke njikọta ma kwalite mgbanwe".
Mgbe ọrụ juputara na aha sinima, yana ihe nkiri karịrị narị abụọ mere, Jackie Chan anatala ya na -asọpụrụ Oscar na Gọvanọ XNUMXth Gala, nke emere na Los Angeles.
Onye na -eme ihe nkiri a ma ama na nka ịgba egwu emezuola nrọ ya, yana nke nna ya, onye Ọ nọ na -eche kemgbe ọtụtụ afọ mgbe a ga -enye nwa ya Oscar.
Jackie zara nna ya sị: "Papa, naanị m na -eme ihe nkiri na ihe nkiri.".
Na gala, Chris Tucker, onye otu Chan na "Rush Hour," webatara Jackie wee kelee ya na ogbo. na statuette a na-atụ anya ya kemgbe.
N'ime gala niile ha hapụrụ na -egosi ụfọdụ vidiyo na akaebe nke ụfọdụ ndị isi na -eme ihe nkiri, dị ka ọ dị na Brett Ratner na Jennifer Yuh.
N'okwu o nyere, Jackie Chan chọrọ inwe okwu ịhụnanya ole na ole maka ndị na -akwado ya, na obere oge tupu ọ nweta ihe nrite:
"Achọrọ m ikele ndị na -akwado m gburugburu ụwa n'ihi gị ọ bụ gị kpatara m ji aga n'ihu na -eme ihe nkiri, na -amapụ na mpio, na -eti ma na -agbaji ọkpụkpụ m. Daalụ".
Akụkọ gbasara onwe
A mụrụ Jackie Chan na Hong Kong na Eprel 7, 1954, ọ dị ogologo 1.74 cm. na ezigbo aha ya bụ Kong-Sang Chan.
Nna ya bụbu onye osi nri maka ndị nnọchi anya French na Hong Kong na ụlọ ọrụ nnọchi anya America na Australia, nne ya bụ Lee-Lee Chan, onye na-elekọta ọrụ ụlọ n'otu isi ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo.
Dị ka akụkọ mgbe ochie, a ga -ekwurịrị na nna ya na nne ya nọ n'ọnọdụ ịda ogbenye, ha na -achọ inye nwa ha nwoke maka nkuchi.
Site na 1961 ruo 1971 Jackie mụrụ nka ịgba egwu, egwu na ịgba egwu na ụlọ ọrụ nyocha Opera nke China. Na 1962, mgbe ọ dị afọ asatọ, o mere ihe nkiri izizi ya na -ekere òkè na fim "Big and Little Wong Tin Bar" (1962).
N'ime afọ 70, ọ matara ụlọ ọrụ ihe nkiri, na -arụ ọrụ na mbụ na -enweghị nzere dị ka ọkachamara yana na mkpụrụedemede nke abụọ. N'ihi ya pụtara na Bruce Lee na "Eastern Fury" (1972) ma ọ bụ "Dragon Dragon" (1973).
N'etiti 70s ọ ga-anabata Pseudonyms dị iche iche, dị ka Cheng Lung ma ọ bụ Chan Yuang Lung, na -ese ihe nkiri dị ka "Aka Ọnwụ" (1976) nke John Woo ma ọ bụ "Killing Treachery" (1977) nke Wei Lo.
N'ime ihe nkiri ya a ma ama na njedebe afọ iri bụ "Enwe mmanya na -egbu egbu n'anya nke agụ" (1978) ma ọ bụ "agwọ dị na ndo nke ugo" (1978).
N'oge a, ọ ga -amalitekwa were ọrụ nchịkwa.
Oge Amerịka ya
Na 1996 ọ ga -eji “Hard to kill” nweta ama ama., na 1996, nke ahụ megheere ya ụzọ Hollywood. Ọganihu azụmahịa ga -abịa "Oge ezumike" (1988), onye na-eme ihe nkiri Chris Turner na Brett Ratner duziri ya.
Aha ndị ọzọ ama ama bụ "Shanghai Kid" (2000), ọdịda anyanwụ nke Tom Dey mere, "The Tuxedo" (2002), "Ike nke ọtụmọkpọ"(2003), ụdị ọhụrụ nke Jules Verne kpochapụwo"Gburugburu ụwa n'ime ụbọchị 80 ”(2004),“ Alaeze amachibidoro iwu ”(2008.
N’oge na-adịbeghị anya, "Super Kangaroo" na "Karate Kid", ma na 2010, emeela ka ọnọdụ sinima ha dị n'otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » Cine » Ndị na -eme ihe nkiri » Jackie Chan na -enweta ihe nrite Oscar
Anyị enwelarị ụgbọala na -adọkpụ maka "Mma na anụ ọhịa"
Aerosmith kwuru nke ọma ịgafe Madrid na Barcelona